Ikhabethe elingaphambi kwechibi eliyimfihlo elinamahektha ayi-5 omhlaba - I-Airbnb
Ikhabethe elingaphambi kwechibi eliyimfihlo elinamahektha ayi-5 omhlaba
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Linda
Ikhabethe elincane - elibekwe eceleni kumahektha ayi-5 omhlaba w / indawo enhle.
Eduze kwedolobha, kodwa ukude ngokwanele ukuze uzizwe ukhululekile futhi ungaxhunyiwe. Ukuvakashela ama-Bald Eagles, i-Otter & Deer. Isikebhe, i-kayak kanye nendawo yomlilo. Indawo yethu AYInayo indawo yokubhukuda. Kuhle kakhulu ukubuka impilo yasendle, i-kayaking, isikebhe, futhi uma unesikebhe sakho futhi wazi indlela yokuhamba endaweni enokhula noma ukusebenzisa indawo eseduze yesikebhe.
Kukhona ukubhukuda eduze & endaweni yesihlabathi phakathi nechibi.
Ikhabethe lethu liklanywe kahle. Inamakamelo okulala amabili, asezingeni eliphezulu. Omunye unombhede ophindwe kabili kanye ne-smart t.v. Elinye igumbi lokulala linemibhede elingana nosayizi ababili. Amakamelo ngalinye livuliwe ohlangothini olulodwa, nakuba kukhona umnyango kanye nekhabethe eligcwele elihlukanisa amakamelo amabili ukuze abe yimfihlo kwelinye.
Ngaphansi kunegumbi lokufunda elinesihlalo sothando, indawo yokudlela, ikhishi eligcwele kanye negumbi lokuphumula elinosofa ogcwele, isihlalo sokuphumula kanye ne-rocker. Futhi, kukhona okokwelapha okwengeziwe, umatilasi wamawele wesivakashi esisodwa esitholakalayo uma kudingeka, sicela ubuze.
Endaweni yokuhlala, kunenye i-smart t.v. isikrini esiyisicaba esine-Wi-Fi namafasitela abheke echibini. Kukhona nedeski elincane ongasebenza kulo. Ikhabethe lethu lithokomele kakhulu futhi lihlotshiswe kahle. Sinikeza imidlalo yebhodi, izincwadi zezingane kanye nabantu abadala, amakhadi, iphazili.
Esizeni kukhona amathoyizi amaningi ezingane ezineminyaka engu-3 nangaphezulu. Igceke livulekile futhi livumela ukuzijabulisa okuningi nomsebenzi wayo yonke iminyaka kanye nabangane be-canine. Kukhona indawo yokucima umlilo egcekeni elivulekile. Ikhabethe linebhavu elilodwa eligcwele elineshawa entsha nendlu yangasese. Kufanele okungenani ube neminyaka engama-23 ubudala ukuze uqashe. Sicela awekho amaqembu nhlobo.
4.68 · 176 okushiwo abanye
Imizuzu emihlanu nje ukuya edolobheni.
Itholakala ku-Upper Clam Lake emangalisayo. Izungezwe ihlane, ichibi nomfula. Indawo ephumulele kakhulu, enesizungu kanye nenala yezilwane zasendle.
I-ATV kanye nemizila ye-snowmobile iyafinyeleleka ekhabetheni lethu. Kukhona i-kayak namavesti okuphila atholakalayo.
Indawo ethule kakhulu futhi enethezekile. Kukhona umgodi omkhulu womlilo egcekeni lethu elivulekile. Kwenza kube ukuphela okuphelele kosuku oluhle.
Sizotholakala ngocingo noma nge-imeyili ngemibuzo noma izinkathazo zanoma yiluphi uhlobo. Ukufinyelela kuzoba ngebhokisi lokukhiya emnyango wangaphambili.